Ikea ibuyisela kwakhona amagumbi okuhlala kwiTV avela kubahlobo, izinto ezingaziwayo, iiSimpsons - Tv Kunye Nefilimu
Umba Wohlaziyo, 2021
Ikea ibuyisela kwakhona amagumbi okuhlala kwiTV avela kubahlobo, izinto ezingaziwayo, iiSimpsons
Ifoto yeNurImifanekiso kaGetty
Ikea iphinde yahlaziya iiseti zamagumbi okuhlala avela kuthotho lweTV oludumileyo kubandakanya Abahlobo , S tranger Izinto kwaye IiSimpson.
Yonke yinxalenye yephulo labo lentengiso lase-United Arab Emirates elinesihloko esithi 'Ubomi boBomi boBomi', obona amagumbi okuhlala amathathu adumileyo enziwe ngokutsha ngumthengisi waseSweden.
Amagumbi amathathu abonisiweyo abandakanya igumbi lokuhlala elimfusa likaMonica kunye neChandler elivela kwi-American 90s sitcom series Abahlobo , UMarge kunye noHomer bepinki kunye negumbi lokuhlala eliluhlaza ukusuka IiSimpson (ifreyimu ye-wonky ifakiwe), kunye negumbi lokuhlala likaJoyce Byers elivela kwiNetflix Izinto ezingaqhelekanga.
Sifumana ikhomishini yeemveliso ezithengiweyo ngamanye amakhonkco kweli nqaku .
Ukwenza igumbi ngalinye, abayili basebenzise izinto zefanitshala zeIkea esizithandayo kwisitayile 'sokujonga'. Ezinye zeemveliso ezisetyenzisiweyo zibandakanya Isitulo seengalo ze-Ektorp , Ukungabikho kwetafile esecaleni kwaye i Uhlobo uphonsa umqamelo .
Kwaye ngoncedo lwesoftware yekhompyuter ekrelekrele, iqela elikhokele iphulo likwazile ukuyila kanye indlela ezibonakala ngayo kwizikrini zethu- zonke iinkcukacha ezincinci zibandakanyiwe.
Amagumbi okubeka abekwe ngokweendidi ezintathu: amagumbi eentsapho, amagumbi amaqabane kunye namagumbi abo bonke abantu, enika abathengi ithuba lokwenza indawo ebalungeleyo.
• Igumbi lamaqabane
Igumbi lomntu wonke
• Igumbi leentsapho
'Sibuyise amagumbi okuhlala awona manyani kwiintsapho ezithandekayo ngamaxesha onke, ngeetoni zokudityaniswa kwefanitshala ngeendlela ezininzi ezahlukeneyo kunye nobukhulu - nangamaxabiso afikelelekayo. Siqokelele zonke iimveliso zegumbi ngalinye, kungenxa yoko kulula ukuphinda uyibone into oyibonayo ekhayeni lakho, utshilo Ikea .
Eli phulo liza kuvela kuhlelo oluthile lwekhathalogu ye-Ikea kwaye liya kuthengwa ebomini kwezinye iivenkile zaseIkea kuMbindi Mpuma.
Ukusebenza kwisifinyezo sokuyila kangangeenyanga, iqela le-Ikea 'lahamba ngamakhulu ezinto ukufumana iziqwenga ezifanelekileyo' ukuzisa la magumbi abonakalayo ebomini. 'Yayingumzamo omkhulu wentsebenziswano okhokelele kwisiphumo esimangalisayo,' uVinod Jayan, umphathi olawulayo we-Ikea e-UAE, Qatar, Egypt nase-Oman uxelele Iveki yeNtengiso .
Ngaba uhlala ufuna ukuba negumbi lokuhlala elimema njengoMonica Geller okanye uHomer Simpson? Ewe, ngoku unako.
amantombazana aseMelika axabisekileyo
Eyona mibala yepeyinti yokuhlambela eyi-2018
ubugcisa baseJapan bokucoca
iintlobo zezikrufu kunye neebhawuda